Ukuphulukana nomsebenzi wezoKhenketho eMantla eQueensland kuya kunyuka ngeKrisimesi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Ukuphulukana nomsebenzi wezoKhenketho eMantla eQueensland kuya kunyuka ngeKrisimesi
Iindaba zeManyano • Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ummandla ukhulise abasebenzi kuwo wonke umnikelo wonikezelo ulungele ubusika obuxakekileyo, kodwa ngoku aba bafundi batsha, kubandakanya ngaphezulu kwama-200 kumzi-mveliso wezokhenketho, abebe kuqeqesho lweenyanga baxelelwa ukuba bafumane omnye umsebenzi.
I-Tropical North Queensland ixhasa ukuphulukana nemisebenzi ye-3,150 XNUMX ngeKrisimesi.
Abasebenzi bezokhenketho be-TTNQ bancipha ukuya kwisiqingatha sobukhulu bayo bangaphambi kobhubhane.
Ukuphulukana nomsebenzi we-TTNQ uziva kuwo onke amashishini.
Eminye imisebenzi yezokhenketho yaseTropical North Queensland eyi-3,150 iya kulahleka ngeKrisimesi inciphisa abasebenzi bezokhenketho ukuya kwisiqingatha sobukhulu bangaphambi kobhubhane, ngokophando olutsha oluvela kwiQonga lezoKhenketho nezoThutho (TTF).
Ukhenketho lweTropiki North Queensland (TTNQ) IGosa eliLawulayo eliyiNtloko uMark Olsen uthe ukhenketho luqeshe abasebenzi abali-15,750 abasisigxina nabangesosigxina kwaye, ngenkcitho yezokhenketho engathanga ngqo, baxhase imisebenzi engama-25,500 iyonke phambi kobhubhane kwingingqi yeCairns.
"NgoJulayi 2021, siphulukene nabasebenzi abasisigxina abangama-3,600, nditsho ngenkxaso kaJobKeeper kunye nemarike yasekhaya ebuyayo," utshilo uMnu Olsen.
“Ingingqi ikhulise abasebenzi kuyo yonke indawo ekulungele ukuthengiswa kobusika ilungele ubusika obuxakekileyo, kodwa ngoku aba bafundi batsha, kubandakanya abangaphezulu kwama-200 abasuka kwicandelo lezokhenketho, abebeziqeqesheni iinyanga kuxelelwa ukuba bafune omnye umsebenzi.
“Abasebenzi abemi phantsi kwaye baphulukana neeyure zomsebenzi ngenxa yokutshixwa kwengingqi yabo banakho ukufikelela kwi-750 yeedola ngeveki Intlekele ye-COVID-19 intlawulo yenkxaso-mali evela kuCentrelink, utshilo.
Ingqonyela ye-Advance Cairns uPaul Sparshott uthe amandla oqoqosho lwengingqi angachacha aya kuncitshiswa kakhulu ukuba abasebenzi abanezakhono balahlekile kwicandelo lokhenketho nokwamkela iindwendwe.
Umnumzana Olsen uthe iTropical North Queensland, kwaye iya kuhlala ingomnye weyona mimandla ichaphazelekileyo e-Australia kwaye imbonakalo yeshishini lokhenketho ibimdaka.
“Ngaphandle kwabathengi, amashishini awanayo ingeniso yokugcina abasebenzi abanezakhono eziphezulu, abanye babo bafumene iminyaka yoqeqesho kwiindawo ezizodwa ukuze babe ngabadlali abatyibilikayo, ukuntywila kwimasters kunye nokuxhuma iinkosi ezibonelela ngamava okhenketho lommandla.
“Uninzi lwamashishini luqhuba ngaphantsi kwe-5% yengeniso yawo yesiqhelo, kwaye ukubhukisha phambili kuyacotha kwiihotele kuye kufikelela kwi-15-25% yokuhlala kwaye ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeedola kwimisitho emiselweyo ngoJulayi nango-Agasti.
“Sineenqanawa eziphumayo zinabakhweli abathandathu kuphela kunye nabasebenzi abane kwaye iindawo ezininzi zikwiiyure ezimbalwa zokurhweba, ngelixa abanye bengene ebuthongweni.
“Njengokuba kuza iholide zesikolo, umsebenzi wentengiso ye-TTNQ ngoSeptemba nango-Okthobha uyakuxhomekeka kakhulu kumaqabane eearhente zokuhamba ukuzama ukunika abathengi ukuzithemba ngokubhukisha besazi ukuba utshintsho luza kuqhubeka ukwenzeka.
"Idatha evela kwiiarhente zohambo zentengiso ibonisa ukuba iCairns iseyindawo yesihlanu ekhangelwe kakhulu kunye neyesithandathu ekubhukeni indawo yokuhamba kwezi veki zine zidlulileyo, kodwa siqhuba ngaphantsi kwe-25% yokukhangela kunye ne-55% yokubhukisha ukusuka apho besikade siqala khona. I-COVID."